दैनिक पोर्न फिल्म हेर्ने एक व्यक्तिले देखे आफ्नै श्रीमतीको पोर्न भिडियो ! – Medianp
दैनिक पोर्न फिल्म हेर्ने एक व्यक्तिले देखे आफ्नै श्रीमतीको पोर्न भिडियो !
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, मङि्सर २०, २०७५१०:५८0
एजेन्सी,२० मंसिर । मानिसमा हरेक कुराको लत लागेको हुन्छ । जस्तै फिल्म हलमा गएर फिल्म हेर्ने मानिस फिल्म हेर्न हलमा नै पुग्छ । हरेक दिन पत्रिका पढ्ने मान्छे उ पत्रिका नपढी बस्न सक्दैन् जसले व्यक्तिको मानसिक रुपमा समेत असर पारको हुन्छ भन्ने तथ्य भारतमा भएको एक घटनाबाट प्रमाणित भएको छ ।
पोर्न फिल्म हेर्ने लत लागेका भारतका एक पुरुष हरेक दिन पोर्न फिल्म हेर्ने गर्दथे । जसको कारण उनको घर व्यवहार नै लथालिङ भएको खबर भातीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख गरिएको छ । हरेक दिन पोर्न फिल्म हेर्ने ती व्यक्तिले फिल्म हेर्ने क्रममा आफ्नै श्रीमतीलाई फिल्ममा देखेपछि आफ्नो श्रीमती लिएर प्रहरी चौकी पुगेका थिए । श्रीमतीले पोर्न फिल्म खेलेको आरोप लगाउँदै प्रहरी चौकीमा पुगेका उनको श्रीमतीको वास्तविकता बारे छानबिन सुरु हुँदैछ ।
विभिन्न तरिका बाट श्रीमतीको पर्ने किल्प बारे खोजतलास गर्दा पुष्टि नभएपछि प्रहरीले ती व्यक्तिलाई सम्झाउँदा पनि नपत्याएपछि ती पुरुष व्यक्तिको मानसिक बिग्रिएको हुन सक्ने भन्दै चेक जाँच सुरु भएको छ । यसरी चेक जाँचको क्रममा ती पुरुष मानसिक रोगी भएको थाहा पाएपछि उनले हेर्ने हरेक पोर्न फिल्ममा आफ्नो श्रीमती जस्तै देख्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उक्त घटनाको कारण ती पुरुषको श्रीमती श्रीमान छोडेर माइत बस्दै आएकी छन् भने हरेक दिन पोर्न फिल्म हेर्ने गरेका ती पुरुष मानसिक सन्तुलन नै गुमाएर घरबार विहीन जस्तै बनेका छन् ।
आलोचना सहन नसकेपछि कड्किए प्रधानमन्त्री, भने– बुद्धिजिविलाई थला पार्दिन्छु